Roobab culus ayaa ka ilaalinaya beeraleyda waqooyiga ALABA in ay beeraan dadweyne - Wardeeq 24 TV Roobab culus ayaa ka ilaalinaya beeraleyda waqooyiga ALABA in ay beeraan dadweyne Wardeeq 24 TV
Home Ganacsiga Roobab culus ayaa ka ilaalinaya beeraleyda waqooyiga ALABA in ay beeraan dadweyne
Roobab culus ayaa ka ilaalinaya beeraleyda waqooyiga ALABA in ay beeraan dadweyne
Roobab mahiigaan ah oo socday labadii usbuuc ee la soo dhaafay ayaa dhulka ka dhigaya mid qoyan, taas oo dib u dhac ku beerista beeraleyda qaar ka mid ah beeraleyda.
Milkiilaha Henderson Farms Stuart Sanderson ayaa jimcihii sheegay in sida caadiga ah beerta ay abuuri lahayd dalagyada galleyda 7 ilaa 10 maalmood ka hor, laakiin roobab culus ayaa ka hor istaagay inay sidaa sameeyaan.
“Beerta midigtaydu waa dhul bannaan hadda. Caadi ahaan, xilligan oo kale sannadka, waxaan horay u heli lahayn hadhuudh ka soo baxa dhulka,” ayay tiri Stuart Sanderson.
Taasi ma ahan kiiska sanadkan, in kastoo.
Xaqiiqdii, dhammaan iniinyaha hadhuudhku wali waxay ku dhexjiraan daadka oo ay weheliyaan kuwa wax beerta.
“Waa iska cadahay inaan helnay dhowr wareeg oo roob ah todobaadyadii la soo dhaafay. Waa nooc naga dhigtay gadaal,” ayuu yiri Sanderson.
Gaar ahaan beeritaanka hadhuudhka dhulka qalalan.
“Marka ay gaarto bartamaha bisha Abriil, waxay noo heleysaa xadka kuleylka dartiis. Waxaan ku beeri karnaa dhammaadka Abriil. Maaha xaaladda ku habboon,” ayuu yiri Sanderson.
Taasi waa sababta oo ah waxaa jira daaqado cayiman oo waqti lagu beero hadhuudhka iyo soyaanka Dooxada Tennessee, iyo hadhuudhka, wakhtigaas ayaa hadda jira.
Dib u laabashadeenna haddii aynaan helin hadhuudhkeennii badnaa, waxay u badan tahay inay dib ugu laabanayso soybeerka oo aan si fiican ula samayn karno sooraha, laakiin waxaan doorbidnay inaan isku dayno oo aan galno dalagga gallayda, ayuu yiri Sanderson.
Dalagyada hadda jira ayaa sidoo kale saameeya roobka oo dhan, sida sarreenka xilliga qaboobaha.
“Qamadiga jiilaalka ee bidixdayda wali wuu fiicanyahay. Waxaan haysanaa meelo yar oo hoose oo bilaabaya inay u nuglaadaan xoogaa cag qoyan, waxaan ugu yeernaa sarreen,” ayuu yiri Sanderson.
Markay xaaladuhu hagaagaan, hase yeeshe, Sanderson wuxuu sheegayaa inay diyaar u noqon doonaan inay beero qiyaastii 3,000 hektar oo galley ah.
“Marka, waad ogtahay marka ay timaado in la baxo, siigada ayaa duuli doonta. Nalalka ayaa ku soo dhacaya qalabka, waanu rogi doonaa” ayuu yiri Sanderson.
Sanderson wuxuu sheegay in aan la beerin dalaga galleyda hada wax saameyn ah kuma yeelan doono dhaqaalahooda, laakiin hadii hadhuudhka aan wali la beerin sadex todobaad kadib hada cimilada darteed, way saameyn kartaa iyaga.
Previous articleRoob culus ayaa ka ilaalinaya beeraleyda waqooyiga Albaama inay beeraan goobo ay ku shiraan
Next articleDADKA SABTI DARAN SABABAY INAY KHARAAR KU YIMAADAAN WAQOOYIGA ALABA